You are here: Home Home Somaliland: Ma liicin, ma laalmin, mana lumin
Maalin ay shacbiga Soomaaliland ka shaki badan yihiin inama soo marin. Taasina wax iska yimid ma aha. Gude iyo dibadba dadka dhegaha ayaa taagan. Qurbo-joogtii waa ay qaylinaysaa. Gudihii waa uu qalaadayaa. Qoon ku dhacday iyo qac nabar ah ma aha. Qaylo-dhaantu waa qawad......Waa saluug aan lagu qanaqcsanayn xukuumaddeennan fadhiidka ah ee aan isku-xidhka iyo wada-shaqaynta lahayn. Waa qanac ka yimid hawl-galka taban ee xukuumaddan aynaan mahadin ee inala anbatay. Waa quus ka timid qaddiyaddan ummadeed ee qof xukuumadda ka tirsani shandadda ku qaatay ee hadba sida uu doonayo uga tarjumayo ee aanay taladeeda iyo tusmaynteeda cidi la wadaagin.